Waxaan bixinaa xalal wax ku ool ah qeybta biyaha
Taageerada emaylka info@bic-iwhr.com
Wac Taageero + 86-13911394250
Warshadda Biyaha Lagu Daaweeyo
Warshad Macaaneedka Biyaha Badda
Biyo Xireenka La Fududeeyay (SED)
Mashruuca Biyo Xireenka Haydarooliga ee Kin Tat
Mashruuca Xeerka Yanji
Mashruuca Qaadista Biyaha Fangcheng
Shirkadda Lanxi Hydropower Station HED Project (Rubber Dam Rec ...
Daaweynta Buuxda ee Deegaanka Deegaanka ee Shouzhou ...
Mashruuca Pilot Dam Pilot Damber Elevator Harbang Chhara
Mashruuca Cusbooneysiinta Shaqada Xakamaynta Fataha ee Tongren Hydropower Station
Codsiyada: Xakamaynta Fataha, dhalinta korantada korantada
Goobta: Guizhou, Shiinaha
Biyo-xireenka fudud ee la fududeeyay (SED) waa biyo-xireen nooc cusub ah oo adeegsada matoor gacmeed gacmeed ama mashiin naafto ah si loogu xakameeyo baararka kor iyo hoosba u xajinaya iyo sii deynta biyaha. Cusbooneysiinta ugu horreysa ee tiknoolajiyada cadaadiska gacanta ee barokac ballaaran oo aan u baahnayn koronto. SED waxay si gaar ah loogu dabaqi karaa aag koronto la'aan iyo xeebta badda. Waqtigan xaadirka ah, waxaa si ballaadhan loogu dalacsiiyay Myanmar, Bangladesh, Vietnam iyo dalal kale.
Biyo xireenka wiishka ee Haydarooliga, oo ay baareen oo ay soo saareen BIC, waa guul hor leh oo laga gaadhay cilmiga sayniska iyo teknolojiyadda. Waa iskudhafka lafilayo ee Haydarooliga "Maamulaha farsamada sedex-dhibic luffing" iyo dhageysiga dhaqanka. Tuulooyinka Haydarooliga waxay taageeraan gadaasha dambe ee guddiga
in kor loo qaado iridda biyaha xanibaya ama hoos loo dhigo iridda marka daadku ka baxo. Waxay ku habboon tahay xaaladaha kala duwan ee biyo iyo biyo; waxaa si ballaaran looga isticmaalaa muuqaalka webiga, keydinta biyaha waraabka, kharashka awoodda kaydka iyo biyo ilaalin kale& biyo-dhalinta, ilbaxnimada deegaanka deegaanka iyo mashaariicda dhismaha magaalooyinka. Tiknoolajiyaddanwaxay heshay shatiyado taxane ah oo ay soo saartay Xafiiska Hantida Caqliyeed ee Dawladdu ee PRC, waxaana lagu taxay 2014 Catalog of Key Promotion and Guiding for Advanced Water Conservancy Practical
Hordhac biyo xidheen
Hordhac Biyo xidheenka Rubber Dam waa nooc cusub oo qaab dhismeedka haydarooliga ah marka la barbar dhigo albaabka birta laga xidho, oo ka samaysan dhar xoog badan oo ku dheggan caag, kaas oo sameeya bac caag ah oo ku xidha dabaqa hoose ee biyo xidheenka. Buuxinta biyaha ama hawada bacda dhaamka, biyo xireenka waxaa loo isticmaalaa haynta biyaha. Ka faaruqinta biyaha ama hawada bacda dhaamka, waxaa loo isticmaalaa sii deynta daadadka. Biyo xireenka Rubber wuxuu leeyahay faa iidooyin badan marka la barbardhigo weirrada caadiga ah, sida qiimo jaban, qaab dhismeedka Haydarooliga fudud, dhisme gaagaaban
Hordhaca Warshadda Daaweynta Biyaha Weelka
Hordhaca Warshadda Daaweynta Biyaha Kaydka ah Warshadda Daaweynta Biyaha Weelka ahi waa badeecad heerkeedu sarreeyo oo ay soo saartay shirkadda Beijing IWHR Corporation (BIC). waxaa loogu talagalay in lagu daaweeyo biyo yar. Warshadda Daaweynta Biyaha Kaydinta ayaa loo kala saaray laba nooc oo taxane ah: (1) Mid waa daaweynta biyaha wasakhda ah oo dib loo isticmaalay: (Warshadda Daaweynta Qashinka-Biyaha ee Kaydsan); (2) Tan kale waa nadiifinta biyaha ee cabitaanka; (Warshad Biyaha Lagu Nadiifiyo)
Hadaf: Si loo bixiyo xalka ugu fiican ee mashaariicda daaweynta biyaha.
Si loo helo qalab daaweynta biyaha ugu kharash badan.
Si loo suurtagaliyo shaqsiyaadka inay helaan biyo nadiif ah oo nadiif ah.
Qiime: Xasiloonida Kalsoonida Teknolojiyadda Dadka u janjeedha
Astaamaha:Habka / xalka la fududeeyey
Waxqabadka 2.High oo leh kharashka ugu fiican ee ugu fiican
Waxtarka 3.High / Isticmaalka tamarta yar
Isku halaynta sare / wareegga nolosha dheer
5.Qalliin fudud iyo dayactir yar
6. Raad yar / Isku halayn
7.Raadinta “farshaxanka wax soo saarka”
oo leh baaxad ganacsi oo daboolaysa la-talin farsamo, adeeg iyo codsi ah; horumarinta wax soo saarka, wax soo saarka, iibinta iyo kor u qaadista, iyo dhismaha mashaariicda ku habboon; iyo iibka iyo wakaaladda tikniyoolajiyada iyo wax soo saarka.
Sida loola macaamilo diirada polarizati ...
Indhaha mashaariicda biyo siinta amniga ...
Qaab-dhismeedka daaweynta biyaha ee hore
Juunyo 2019 Loo shaqeeyaha ayaa booqanaya Bhora HED Pilot ...
Julaay 2019, booqashada BIC ee Wasaaradda Beeraha ...